RTW သည် EBU အသံကျယ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုပံ့ပိုးသည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » RTW နယူး EBU အသံကျယ်အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်ထောက်ပံ့
Cologne, ဂျာမနီ, ဇန်နဝါရီ 30, 2016 - RTW, ဦးဆောင်အမြင်အာရုံအသံမီတာရောင်းချသူနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လွှင့်, ထုတ်လုပ်ခြင်း, post ကိုထုတ်လုပ်မှုနှင့်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုများအတွက် devices တွေကိုစောင့်ကြည့်ဖို့သောသူအပေါင်းတို့သည်မကြာသေးမီကထုတ်ဝေ updates များကိုကြေညာဖို့ကျေနပ်ဖြစ်ပါသည် EBU အားဖြင့် R128 ယင်းနှင့်အတူထောက်ခံနေကြတယ် Touchmonitor တူရိယာ၎င်း၏စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် SurroundControl 31900 နှင့် 31960 စီးရီး အသံကျယ်တိုင်းတာလုပ်ဆောင်ကြောင်းနှင့်အားလုံးဆော့ဖ်ဝဲကိုထုတ်လုပ်ပါတယ်။
အဆိုပါမွမ်းမံမှုများနှင့်အတူအဓိက EBU အသံကျယ်ထောက်ခံချက် (EBU R ကို 128) မပြောင်းလဲအဲ့ဒီအချိန်မှာ, ဒါပေမယ့်ရေတိုပုံစံအကြောင်းအရာနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်အဆိုပါဖြည့်စွက်ရှင်းလင်းလွယ်ကူသောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အသုံးပြုသူများသည်အသုံးပွုနိုငျယခင်ဗားရှင်းဖြစ်စေအများဆုံးခုနှစ်တွင် Momentary တစ်ခုသို့မဟုတ်အမြင့်ဆုံး Sကြော်ငြာ, အထူးနှုန်းများ, etc ၏ကျယ်လောင်သောသွင်ပြင်လက္ခဏာများနှင့်ထိန်းချုပ်ရန်တစ် parameter သည်အဖြစ် hort-ဝေါဟာရကိုကျယ်လောင်တိုင်းတာခြင်း .; ဗားရှင်းအသစ်အတွက်သာရေတိုရေရှည်တိုင်းတာခြင်းလိုအပ်ပါသည်။ EBU options တွေကိုလျှော့ချအကြောင်းအရာလဲလှယ်ရိုးရှင်းကူညီခြင်းနှင့်နေ့စဉ်စစ်ဆင်ရေးအတွက်ကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ထားသည်။ RTW တစ်လွတ်လပ်စွာ selection အင်္ဂါရပ်အဖြစ်ဤ function ကိုဟောကြားခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့နေ့စဉ်အလုပ်အတွက်အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်သည်အတိုင်းကိုသုံးစွဲသူများနှစ်ဦးစလုံးတိုင်းတာပေါ်တွင်သို့မဟုတ်တဦးတည်းကိုချွတ်သို့မဟုတ် turn လိမ့်မည်။
အဆိုပါ '' EBU Mode ကို '' အသံကျယ်မီတာအသေးစိတ်ဖော်ပြချက် (EBU Tech မှ 3341) အသစ်အနိမ့်ဆုံးလိုက်နာမှုလိုအပ်ချက်များကိုနှင့်အမျိုးမျိုးသော ပတ်သက်. ရှင်းလင်းပြောကြားအတူ updated ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါဖြည့်စွတ် EBU အသံကျယ်စမ်းသပ်ထား 15 အသစ်များကိုစမ်းသပ်အချက်ပြမှုများနှင့်အတူတိုးချဲ့လျက်ရှိသည်။ ၏သင်တန်းအားလုံး RTW အသံကျယ်ထုတ်ကုန်ဒီလိုက်နာမှုစမ်းသပ်မှုအဖြစ်အကောင့်ထဲသို့သစ်ကိုအသံကျယ်အကွာအဝေးတိုင်းတာခြင်းသတ်မှတ်ချက်များ (EBU Tech မှ 3342) ယူပြီးဖြတ်သန်းရတယ်။
အသုံးပြုသူများ RTW ရဲ့ဝဘ်ဆိုဒ်ပေါ်သို့ logging အားဖြင့်အခမဲ့နောက်ဆုံးပေါ် firmware ကို download လုပ်ပါနိုင်သည် www.rtw.com/nc/en/download/manuals-software.html
Cologne (ဂျာမနီ) အခြေစိုက် RTW, အတှေ့အကွုံဒီဇိုင်း, ထုတ်လုပ်နှင့်စျေးကွက်၏ 50 နှစ်ပေါင်းအရည်အသွေးမြင့်အသံမီတာစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရေးကိရိယာများများအတွက်စျေးကွက်ဦးဆောင်ခြင်းနှင့်တီထွင်ဆန်းသစ်, မှတ်တမ်းတင်ခြင်း-စတူဒီယိုပစ္စည်းကိရိယာများချီတက်ခဲ့သည်။ RTW တစ်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့်ဝန်ဆောင်မှုကွန်ယက်ကိုလုပ်ကိုင်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။ RTW, အလည်အပတ်ခရီးအပေါ်ပိုမိုသိရှိလိုပါက www.rtw.com, www.facebook.com/rtw.de သို့မဟုတ် + 49 221 709130 ခေါ်ဆိုပါ။
ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ post ကိုထုတ်လုပ်မှု ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2016-01-28
ယခင်: trilogy ပာအားလုံး-IP ကိုတိုက်ရိုက်အသံလွှင့်ထုတ်လုပ်မှုထောက်ပံ့
နောက်တစ်ခု: ထုတ်လွှင့် Pix ဗားရှင်း 5.0 ဆော့ဝဲဦးလွတ်မြောက်